विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरसको नयाँ र खतरानक भनिएको ओमिक्रोन भेरियन्टका संक्रमित भेटिएका छन् ।
सोमबार दिउँसो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई जनामा कोरोनाको यो नयाँ भेरियन्ट भेटिएको पुष्टि गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार ६६ वर्षका एक विदेशी नागरिक र उनको सम्पर्कमा आएका ७१ वर्षका एक व्यक्तिलाई कोरोनाको यो नयाँ भेरियन्ट संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो । दुवै जनाले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यी दुईमध्ये विदेशी नागरिक यसअघि कोरोनाभाइरसको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नेपाल प्रवेश गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो भेरियन्ट संक्रमण पुष्टि भएका दुवै जना अहिले अस्पतालमा भर्ना भएका छन् ।
तर, मन्त्रालयले कोरानाको यो नयाँ भेरियन्ट भेटिएको स्थानबारे केही जानकारी दिएको छैन ।
२४ नोभेम्बरमा सबैभन्दा पहिले दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाभाइरसको बी.१.१.५२९ भेरियन्टलाई ‘ओमिक्रोन’ नाम दिइएको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई भेरियन्ट अफ कन्सर्न पनि भनेको छ ।
यो भेरियन्टबारे अहिले अध्ययन भइरहेको र अहिले रहेका विभिन्न खोपहरुले यसविरुद्ध कति प्रभावकारी रुपमा काम गर्छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन भइसकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अहिलेसम्म नेपालसहित ३६ देशका ५७६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
केही दिनअघि भारतमा पहिलो पटक ओमिक्रोन भेरियन्टका संक्रमित भेटिएका थिए । तर, त्यहाँ केही दिनमा नै ३ दर्जनभन्दा बढीमा कोरोनाभाइरसको यो नयाँ भेरियन्टका संक्रमित भेटिइसकेका छन् ।
यसअघि फरकधारमा एक लेख लेख्दै डा. शेरबहादुर पुनले ओमिक्रोनको हल्ला बढी भएको भन्दै यसबारे सचेत रहन आग्रह गरेका थिए । पढ्नुहोस्, उनको लेख र यसबारे प्रकाशित अन्य समाचार—
ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमण भएको कसरी थाहा पाउने ? लक्षण के के हुन् ?
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट कसरी आइपुग्यो नेपाल ?
प्रकाशित मिति : मंसिर २०, २०७८ साेमबार १३:१७:२९, अन्तिम अपडेट : मंसिर २०, २०७८ साेमबार १४:२२:४८